Medieval Obere Ihe Ngwurugwu Na-alụ ọgụ na astgba Ọbara | Gam akporosis
Nye na-edebanye aha maka mgbawa Ọbara 'fun medicalval physics agha?
Bastards na-agba ọbara bụ egwuregwu ọhụrụ na gam akporo na-akpọrọ anyị gaa ọgụ ndị ahụ n'etiti ndị egwuregwu abụọ yi uwe ochie na ihe na-atọ ụtọ nke ahụ bụ physics nke ihe. A na-ebuzi physics ahụ niile nke ndị agha ahụ ga-eme mmegharị nke nwere ike ịbụ akụkụ nke arụmọrụ na-atọ ọchị karịa ọgụ.
Mma, anyụike, maces, hama na ndị ọzọ na usoro nke ngwá agha anyị ga-enwe ya n’aka anyị ka anyị wee nwee ike ịme mmegide ndị ahụ ezubere iche site na mmegharị ahụ. ọ bụ ezie na ọ ga-adị ka ịgba egwu obere iju. N'agbanyeghị nke ọ bụla, anyị ga-anwa ime ya ihe ziri ezi iji wepụta ndụ n'ụlọ mmanya ndị iro anyị. Gaa maka ya.
1 Physics na-eme ihe ya mgbe niile na egwuregwu ndị a
2 N'ime 100 ngwá agha dị iche iche na Bastards ọbara
3 Ọtụtụ puku ọkwa
Physics na-eme ihe ya mgbe niile na egwuregwu ndị a
Enweghị egwuregwu ole na ole nke ụdị a nke gabigara na ahịrị anyị ma na-enwekarị njikọ: ha bụ oke osimiri nke ọchị. Egwuregwu Egwuregwu 2 bụ ihe ikpeazụ anyị nwere maka Androidsis yiri nke a ọbara ọgbụgba nke anyị ga-enwe jiri mmegharị ahụ na mmegharị ngwa ngwa ịkọ ụfọdụ ụlọ mmanya nke onye iro anyị.
Anyị nwere pịa ngwa ngwa n'akụkụ ihuenyo ọ bụla ịkwaga onye agha anyị na-eme ihe ike na ogologo pịa iji jiri aka nri n'otu akụkụ, ma ọ bụ nke ọzọ maka aka ekpe. Mgbe ahụ anyị nwere mmegharị ahụ iji megharịa mmegharị nke na-akpata mwepụ nke ogwe aka anyị wee si otú a mepụta mmebi ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ike imetụ "ahụ" nke onye iro anyị aka.
Nke a bụ otu esi kee ha ụfọdụ nnọọ na-akpa ọchị oge nke ndị agha abụọ ahụ hapụrụ ogwe aka ha ma gbalịa pupate nke ọzọ. Anyị ga-achọta oge dị mma iji rụọ ọrụ ọgụ ahụ iji kụọ ebe ahụ, ọ bụkwa ebe a ka obi dị n'okwu banyere egwuregwu Bastards.
N'ime 100 ngwá agha dị iche iche na Bastards ọbara
Na nke ahụ 2D anya na na physics nke ihe anyị ji ihe karịrị otu narị ngwa agha dị n’aka anyị. Kedu nke ga - eme ka oge na - atọ ụtọ karịa mgbe ha dara karịa ihe dị mkpa ma ọ bụ na anyị amaghị etu esi ejide ụlọ ọrụ ha.
Ọ bụghị naanị na anyị na-ekwu maka ngwa ọgụ, kamakwa ngwa agha na ọta bụ ihe dị mkpa iji nwee ike ichebe onwe anyị pụọ na mwakpo ndị iro. Kpachara anya n'ụfọdụ akụkụ ma ọ bụ ụkwụ anyị, n'ihi na ha nwere ike ịdị kewapụrụ onwe m na mbuso agha kachasị njọ nke onye iro ahụ na ọ gaghị eche ọtụtụ ihe gbasara ya iji kpochapụ anyị.
Ọbara Bastards na-egosipụta agwa agwa na ikike ịzụta ngwa ọgụ ndị ọzọ. Anyị nwekwara isi iji mee ka nkwụsi ike, mmebi na usoro ọnụọgụ ọzọ nke ejiri mepụta mwakpo na ike nchekwa ya. N’akụkụ a, Bastards ọbara na-eduga anyị ka anyị gbalịa ịzụlite akparamagwa anyị n’ụzọ ziri ezi ka anyị wee kwadebe ya maka ụdị ndị iro niile.
Ọtụtụ puku ọkwa
Na nke a anyị rutere na a ọtụtụ ọkwa nke iji nwee ọtụtụ egwuregwu na nke anyị nwekwara ọtụtụ egwuregwu, mana n'ụzọ mpaghara. Nke ahụ bụ, ọ dị anyị mkpa inwe otu njikọ WiFi ahụ ekekọrịta iji nwee ike igwu egwu megide onye ọkpụkpọ ma ọ bụ onye ọrụ ibe ọzọ.
Maka akụkụ na-emetụ eserese ahụ, ọ nwere ihe na-akpali pixel art na na badass aka nke mere na ọgụ ahụ siri ike na ntakịrị oge ochie. Ọbụna anyị nwere ndị na-ege ntị ga-ebigbọ ka ike ahụ na-abawanye na nke na-enye ya ikuku iji nwee ọ enjoyụ egwuregwu a nke ọma na njedebe dị mma na ekwentị anyị.
Ndị ara na-agba ọbara na-abịa na gam akporo Achọrọ m ka gị na oge ndị ahụ na-atọ ọchị n'ihi physics nke ihe. Ozugbo anyị mere ngagharị nke ogwe aka na onye agha anyị, n'ezie ị ga-enweta ọtụtụ elele na ya.
Fun na ezigbo ihe physics zuru oke maka mwakpo nke ndị dike a.
Ọ maara ka esi egwu kaadị ya nke ọma
Di iche iche nke ngwá agha
O nwere ike gbagwojuru anya ma ọ bụrụ na anyị anaghị agagharị
Umu ara nke ọbara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nye na-edebanye aha maka mgbawa Ọbara 'fun medicalval physics agha?
Esi gbanwee ndabere nke chatgram Telegram